मान्छे बेच्ने दलाल महामहिम राजदूत !
कूटनीतिक क्षेत्रकै उपहास काठमाडौं: सरकारले सोमबार १४ जना राजदूतहरुको नाम सिफारिस गर्‍यो । राजदूतको सूची देख्नासाथ सांसद पदमा जस्तै कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि पैसा खाएर मान्छे बेच्ने दलाललाई नियुक्त गरिएको छ ।
संयोग कस्तो भने, सरकारले शर्मिला पराजुलीलाई ओमानका लागि राजदूत सिफारिस गर्दै गर्दा उनी मेनपावर व्यवसायीका रुपमा ओमानतिरै डिमान्डका लागि डिल गर्दै थिइन् । अर्को संयोग के भने मधेसी जनताको अधिकारको वकालत गर्ने मधेसकेन्द्रित दलबाट राजदूत सिफारिस पर्ने शर्मिला पहाडे महिला परेकी छिन् ।
३६ वर्षीया शर्मिला पराजुली (ढकाल) ओमानका लागि दोस्रोपटक राजदूत सिफारिस भएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी वृत्तमा खैलाबैला मच्चिएको छ । उनी राजदूत बनेको देश ओमानमा समेत कामदार पठाउने व्यवसाय चलाउँछिन् ।
जुन देशमा मान्छे सप्लाई गर्ने हो, त्यही देशको राजदूत भएपछि शर्मिलाको भूमिका अब कता केन्दि्रत होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
प्रभावशाली नेतालाई ‘प्रभावमा’ पार्न सक्नेबाहेक शर्मिलाको कुटनीतिक अनुभव छैन । शुरुमा मलेसिया र पछि दुबईमा बसेर वैदेशिक रोजगारीको धन्दा चलाएकी पराजुलीको गतिविधि पछिल्लो समय ओमानमा केन्द्रित छ । उनले ओमानकै राजदूत हुन सबै शक्ति प्रयोग गर्नु यसैले पनि अर्थपूर्ण छ ।
झापा चन्द्रगढीकी शर्मिला गृहजिल्लाका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा पनि विजय गच्छदारको कोटाबाट ओमानको राजदूत सिफारिस भएकी थिइन् । तर, उनी नियुक्त नहुँदै ओली सरकार ढलेकाले सिफारिस बदर भएको थियो ।
शर्मिलाको शक्ति बलियो भएरै होला, गच्छदारको पार्टी सरकारमा नभए पनि उनी राजदूतमा सिफारिस भइन् ।
दुबईमा बसेर बिभिन्न देशमा कामदार सप्लाई गर्ने कार्यमा संलग्न पराजुलीले राजदूत हुनका लागि धनराशीसमेत खर्च गरेको स्रोतको दाबी छ ।
शर्मिलाको सिंगै परिवार म्यानपावर व्यवसायमा सक्रिय छ । बानेश्वरको थापागाउँमा उनका पति विमल ढकालका नाममा फ्लोरिड नामको मेनपावर कम्पनी छ । बीएसडी हुमन रिसोर्स सोलुसन, रोयल डाइमण्ड रिक्युटमेन्ट जस्ता युवायुवती विदेश सप्लाइ गर्ने कम्पनीहरुमा शर्मिला र उनका परिवारजनको संलग्नता छ ।
प्रायः कामदार डिमान्डका लागि बाहिरै रहने शर्मिला आफू उच्च तहको कन्सल्ट्यान्ट रहेको दाबी गर्दै आएकी छिन् । ओमानमा सन् २०१४ मा नेपाली दूतावास खोल्ने निर्णय भएको हो । र, शर्मिला त्यहाँको पहिलो राजदूत बन्न पुगेकी छिन् ।
कूटनीतिक सेवाकै उपहास !
ओमानमा पहिलोपटक खुलेको राजदूतावासमा मेनपावर व्यवसायीलाई राजदूत बनाउँदा उनको प्राथमिकता नेपाली कामदारको हितमा भन्दा पनि व्यापार प्रबर्द्धनमा केन्द्रित हुने निश्चित छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले राजदूत पद र कूटनीतिक सेवाकै उपहास भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उता नेपाली कांग्रेसभित्र राजदूत सिफारिसमा परेका व्यक्तिको नाम सुनेर नेताहरु नै चकित भएका छन् । कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरुमात्र होइन, राजदूत सिफारिस गर्ने क्याबिनेटका मन्त्रीहरुले समेत कांग्रेसबाट राजदूतको सिफारिसमा परेका दुईजना महामहिमलाई चिन्न सकेनन् । तर पनि उनीहरुबाट प्रस्ताव पारित भयो । कांग्रेसको कोटाबाट राजदूत भएका रमेशप्रसाद कोइराला र आशा लामा को हुन् भनेर सोध्दा कांग्रेस नेता र मन्त्रीहरु नै अनविज्ञता देखाए । राजदूत नियुक्तिमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको टिप्पणी एक कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्रीले गरे । उनले भने- तीन जनासँग पैसा लिएर राजदूत बनाइएको कुरा आएको छ ।
कांग्रेसबाट युएईको राजदूत बनेकी आशा लामाले ‘आशा फाउन्डेसन’ खोलेकी छिन् । उनको संस्थाले युवतीहरुलाई काम सिकाएर विदेश पठाउँदै आएको छ र, यो एक प्रकारले म्यानपावर नै भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
यसैक्रममा उनी पनि वैदेशिक रोजगारीको राम्रो गन्तव्य मानिने युएईमा कांग्रेसको कोटाबाट राजदूतमा छानिएकी छिन् ।
Times 733476	Visited.